फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - कान्छालाई चिट्ठी
कान्छालाई चिट्ठी लक्ष्मण गाम्नागे
कान्छा, शुभ आशिक छ ।
ज्यानलाई ठिकै भए पनि मनलाई बेठिक छ । साह्रै रनभुल्लमा परेको छु । देश र प्रदेशको निर्वाचन आयो भन्छन् । चुनावमा उठेका नेता कार्यकर्ताहरूको लर्को लागेको छ गाउँमा । भोटका लागि हामीलाई अनेक तरहले फकाइरहेका छन् । हामी हत्तपत्त फकिनेवाला थिएनौँ । उहिलेका नेताहरू जस्तै सम्झेर अहिले पनि हामी मुन्टो बटार्दै थियौँ । तर यसपालि चाहिँ अलि अनौठा उम्मेदवारहरू देखापरे गाउँमा । पहिलाका भन्दा लगनशील, परिश्रमी र जनसेवी जस्ता । तिनीहरूले भोट माग्ने नौलानौला तरिका प्रयोग गरेर हामीलाई भल्स्याङभुल्सुङ पार्न थालेका छन् । एकपछि अर्को झन् झन् सिपालु । सबैलाई जिताउन पाए हुन्थ्यो जस्ता । साह्रै दोधारमा पारे कान्छा यिनीहरूले ।
पहिला पहिलाका उम्मेदवारहरू यो गरौँला, त्यो गरौँला भनेर ढाँट्थे, जान्थे । तर अहिलेकाहरू त हामीलाई कामै सघाएर भोट माग्छन् । खेतमै, बारीमै, खर्कमै, पँधेरामै, गोठमै, चुलामै, ओछ्यानमै आएर हामीलाई मुसार्छन् । उनीहरूले गरेका समाजसेवाका फोटाहरू तैंले पनि फेसबुकाँ देखिस् होला । शुरुमा एकजना उम्मेदवारले खेतमा आएर चारपाँच मिनेट जति धान काटेर फोटो खिचे । त्यो फोटो फेसबुकमा देखेपछि अरुअरु उम्मेद्वारहरू पनि धमाधम गाउँ पसेर जनताको सेवामा होडबाजी गर्न लागे । धान काट्ने उम्मेदवारका बिरोधीले हाम्रा गोठको भकारो सोहोरे । अर्का एकजनाले भैंसी चराए । कोही दुँधेरो बोकेर गाई दुहुन लागे, कोही जाँतोे घुमाउन थाले । हाम्रो सेवामा यतिसम्म लिन भए कि एकजना उम्मेदवारले जेठाबाको चर्पी टल्काउँदै गरेको फोटो खिचेर लगे ।
एकजना ठिटा उम्मेदवारले एकघण्टा हाम्री नातिनीको कोक्रो हल्लाइदिएर बुहारीलाई भोट दिने बाचा गराएर गए । तिनले कोक्रो हल्लाएको थाहा पाएर अर्का एकजनाले त नानीले फोहोर गरेका थाङ्ना लगेर धुन पो थालेछन् । अर्का उम्मेदवारसँग धारामै थाङ्ना खोसाखोस भएछ, ल हेर त कान्छा ! तानातानले गर्दा त्यसको भिडिओ चाहिँ बिग्रिएछ, फेसबुकाँ हाल्न पाएनछन् । माया लागेर मेरा त आँखामा आँसु नै आयो । आँसुको कुरा गर्दा एकजना उम्मेदवारले पुरानी कलाकार भन्ने थाहा पाएर तेरी ठूली भाउजूलाई डाँको छाडेर रुन लगाएछन् । एकछिन रुवाएर रुमाल झिकेर आँसु पुछिदिएछन् । त्योे रोएको र आँसु पुछेको भिडिओ फेसबुकाँ देखेपछि सारा गाउँले उनैलाई भोट हाल्न कस्सिएका छन् । कस्ता कस्ता शिप भएका नेता जन्मिएछन् हाम्रो देशमा बाबै !
हाम्रा दुःखका दिन गएछन् अब । हुँदाहुँदा एकजनाले त मेरा खुट्टा च्याप्पै समातेर तातो पानीले धोइदिएर, तेल लगाइदिएर ढोगे । शरमले मेरो त सासै जाला जस्तो भो । फेसबुकाँ आयो कि आएन कान्छा त्यो ? अर्की एउटी ठाँट परेकी महिला आएकी थिइन्, बाटोमा जसलाई भेट्यो उसैलाई गम्लङ्ग अँगालो मार्थिन् । भन्न पनि लाजमर्दो, मलाई पनि भोट दिउँदिउँ पारेर गइन् ।
यस्ता अनेक उपकारी उम्मेदवारहरू आएका छन् । एउटा भोट छ कसलाई दिने कसलाई नदिने, साह्रै दोधारमा पारे असतीहरूले । एउटालाई भोट हाल्दा अर्काकोे पाप लाग्ने, अर्कालाई हाल्दा अर्काकोे श्राप लाग्ने । मरेपछि नर्कमा परिएला भन्ने डर भइसक्यो । भोट हाल्नै नजाउँ भन्दा पनि पछि घिसार्न आइहाल्छन् । साह्रै टेन्सन भयो कान्छा, चाँडो घर आइज, एउटा टुङ्गोमा पुग्नुप¥यो ।
–उही तेरो बा रणभुल्ल नेपाली
टिपर चालकलाई सपथ !
सरकारलाई अप्ठेरोमा नपारौँ क्या !
सबै ठीक छ सरकार
माननीय घरबेटीको मनको मन्तव्य
© COPYRIGHT 2021 Fitkauli सम्पादक प्रकाशक : नरनाथ लुइटेल ईमेल : narnath@gmail.com कार्यलय ठेगाना : का.म.पा कलंकी १४ सम्पर्क नं : 9841521748